နန်းခင်ဇေယျာ၏ ပေးဆပ်မှုနိဒါန်း | MoeMaKa Burmese News & Media
အိမ်ပြန်လမ်းကို မျှော်နေကြသည့် မိသားစုများ (သို့မဟုတ်) မလေးရှား လူမှုခရီးစဉ်
12 Responses to နန်းခင်ဇေယျာ၏ ပေးဆပ်မှုနိဒါန်း
နိုင်းလေး on December 3, 2012 at 9:18 am
မြင့်မြတ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် အထူး လေးစားလျှက်ပါ နန်းခင်ဇေယျာ
myatsoe on December 3, 2012 at 1:00 pm
kokosw1@gmail.com on December 5, 2012 at 3:18 pm
Kachin on December 3, 2012 at 1:11 pm
အပြင်းစား ဘဲ မနိုင်ဘူး မရမ်းချောင်အလှူကတည်းကလေးစာနေမိပါတယ်
စိမ်း on December 3, 2012 at 4:59 pm
နန်းခင်ဇေယျာ ပြည်သူနှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ လေးစားမိပါတယ်။
super on December 3, 2012 at 6:18 pm
မနန်းဇေယျာကို အသားလွတ်ဝေဘန်တဲ့ မြန်မာအိတ်စပ၇က်ကောင်တွေနဲ့တော့ နံ့သာဆီနဲ့အီးလို ကွာတယ်။ ။
saw Hla Mon on December 4, 2012 at 1:45 am
လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်အားထက်တန်စွာပါဝင်လုပ်ဆောင်တာတွေ့တော့မချီးကျူးဘဲမနေနိုင်ပါဘူး လေးစားပါတယ် ညီမလေးနန်းခင်ဇေယျာ
ဇော် on December 4, 2012 at 10:56 am
pyaephyo on December 6, 2012 at 10:59 am
di pa on December 6, 2012 at 6:14 pm
myanmarexpress user are rude.
Ye Phone Aung on December 7, 2012 at 12:45 pm
မြန်မာအိတ်စ်ပရက်စ်ကကောင်တွေအကြောင်းကို. ဒီဆိုဒ်လေးမှာမရေးပါနဲ့ဗျာ. ကျက်သရေတုံးလွန်းလို့ပါ….
koswe on December 9, 2012 at 9:52 am
ညီမလေး နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသား မှမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေပေါက်ဖွားလာတာပါ…ဂုဏ်ယူပါတယ်။